Even, Ato Lema his Key friends, Dr. Abiy & their Defense etc. Ministers are in it! – Kichuu
HomeAfaan OromooNewsEven, Ato Lema his Key friends, Dr. Abiy & their Defense etc. Ministers are in it!
WBOn Wabii Oromooti!!!!!!!!!!
WBOn maqaan isaa Jaal Adam Sayiid (Ibsaa Adduunyaa) kan jedhamu Qeerroo Walloo-Kamisee, Aanaa Baatee – Ganda Gaarirrootti dhalate. Baroota hedduuf Aanaa Baatee keessatti akka Qeerrootti Ummata Oromoof osoo falmuu, dararaan mootummaa wayyaanee ummata isaa irratti ulfaachaa gaafa dhufu biyyakoo bilisoomsuun qaba jedhee bara 2016 gara biyya Yamaniitti imale.
Yamanii ga’ee Oromoota Yaman jiraniin erga wal baree booda, carraa gara biyya Arabaa deemuu argate. Anii sabaakoo bilisoomsuufan ba’e jedhee baruma 2016 gara Mooraa WBO Ertiraatti argamuutti imale. Leenjii Jajjabee erga fudhatee booda, qooda isaa fudhatee ba’uuf osoo jechaa jiru araarri Mootummaa Itoophiyaa fi WBO gidduutti ta’e. Sanaa booda karaa Zaalanbassaa WBO 1300 seenan keessaa isa tokkoodha.
Erga biyya seenanii booda, Mooraa Ardaayitaa galanii leenjii fudhachaa turan. Haalli Ardaayitaa keessa jiruus waan ummataaf dhaabbatan itti fakkaachuu dide, anii Mindoomee hojeechuus hin fedhu, hanga Oromiyaan bilisoomtuutti ani qabsoo guutuu kan atakaaroo hin qabne qabsaa’uun dirqama itti taanaan Miiltoo isaa nama 6 ta’aanii halkan walakkeessa Mooraa Ardaayitaa keessaa badanii ba’an.
Mooraa Ardaayitaa erga Lakkisanii booda osoo gara Walloo dhaqee Maatii isaa hin dubbisiin kallatti gara Lixa Oromiyaatti imalanii WBO Zoonii dhiyaatti dabalaman.
Ajajaan WBO Zoonii Dhihaa Hawwii fi Fedhii isaanii ilaalee WBO waliin Rimiddii kenneefii bobbaase. WBO waliin Lixa Oromiyaa, Daarimuufi bakkeewwan adda addaa keessa deemee qabsoon Oromoo akka hin laafneef tajaajila osoo kennuu, guyyaa gaafa 18/3/2018 Wareerri guddaan karaa Wayyaanee fi Gumuziin Wallagga Bahaa irratti Lola bantee Ummata Oromoo fi Poolisoota Oromiyaa nurraa ajjeesan. WBO Wabii Oromoo waan ta’aaniif, Ummata Oromoof dhaabbachuun dirqama waan itti ta’eef WBOn guyyaa gaafa 19/3/2018 Kamaashiitti seenanii diina Oromoo jilbeenfachiisanii, Daangaa Oromiyaa keessaa baasan. Jaal Adam Sayiid WBO diina kuffisee kufe keessaa tokkodha. Jaal Adam Sayiid Lubbuunkee haa jannatu.
WALLOO – BAATEE – GAARIRROO
Ya Oromoo: Ulfinni manaa baha jedha Oromoon. Hogganoonni mootummaas ta’ee kan dhaaba siyaasaa kamuu warra achi fagoo of jaalachiisuuf rakkachuu dura – https://t.co/94k9kbR40R pic.twitter.com/SghuL3DICQ